Ny fanantenana andrasana dia mitondra fahafaham-po amin'ny mpanjifa | Martech Zone
Nandritra izay taona vitsy lasa izay dia niasa tamina tontolon'ny teknolojia fanombohana adin-tsaina aho. Olana roa izay tena mitavozavoza amin'ny fanombohana dia ny tsy fisian'ny antenaina azo antenaina amin'ny fizotry ny varotra sy ny varotra ary koa ny fanosehana ireo fiasa vaovao ilaina amin'ny fanantenana. Ny fampifangaroana ireo loza roa ireo dia mety hanimba ny orinasanao raha tsy mandanjalanja ianao amin'ny fandrosoana miaraka amin'ny mpanjifa izay efa natoky anao.
Manosika ny endri-javatra manaraka ny fanenjehana ny fanantenana manaraka raha toa ka tsy tratrao amin'ny mpanjifanao ankehitriny ny lalao dia lalao mampidi-doza. Nandinika azy io tamin'ny orinasa maromaro aho ary tsy mbola nahita hoe tena miasa mba hanombohana ny dingana manaraka.
Izy io dia fitambarana fahafaham-po sy famoahana endri-javatra mandroso izay hanangana ny orinasanao hendry. Tsy maintsy afindrao ny bara amin'ny lafiny roa mba hahomby.
Ireto misy eritreritra fanampiny:
Raha tsy ampy mpiasa ianao ary mitombo haingana, mandany ora sy ora maro hametrahana ny mpanjifa tezitra izay tsy napetraka araka ny marina ny fiandrasana dia hampiadana anao, raha tsy manakana anao.
Raha tsy ampy ny fiasao dia amidio ny fahamarinana, ny fahitana, ny fitarihana ary ny mpiasa ao amin'ny orinasanao. Olona lehibe afaka manao zavatra hitranga.
Aza mampanantena fisehoan-javatra alohan'ny anananao azy ireo. Tsy maninona ny miresaka amin'ny backlog anao, fa ny manome daty marim-pototra amin'ny fizotry ny varotra dia fampanantenanao izay hotanterahinao.
Raha misy fiankinan-doha amin'ny mpanjifa, ampitao am-pahombiazana izy ireo ary ataovy izay hahatakaran'ny mpanjifanao ny vokatry ny tsy fanatanterahana ny andraikitr'izy ireo amin'ny fizotry ny varotra sy ny fampiharana.
Avelao ny lesoka. Hitranga ny fahatarana, hitranga ny lesoka, hampiakatra ny lohany ratsy tarehy ny bibikely. Hamarino fa mamela ny voalaza etsy ambony ny fandaharam-potoananao.
Aza avela hamaritra ny fandaharam-potoananao ny mpanjifanao, raha tsy izany dia mandray andraikitra ianao rehefa tara. Aleo vitaina dia vitaina tsara fa tsy vita tsara tara na diso aloha.
Fehezo ny mpiasan'ny varotrao ary asaivo mandray andraikitra izy ireo amin'ny famitana diso fanantenana. Aza atolotra ny tsipika famokarana ny olana. Tsy rariny raha olon-kafa manatanteraka fampanantenany tsy misy kilema.
Alefaso ny fitaovanao amin'ny varotra. Tsara ny manitatra ny voambolanao marketing, fa aza mampanantena vokatra, endri-javatra, famoahana, fandaharam-potoana, na serivisy izay tsy azonao tanterahina amin'ny zava-misy.
Mampandre ny mpanjifa avy hatrany rehefa tsy eo ny tetik'asa. Ilaina tokoa ny fahafantaran'ny mpanjifa ny zava-misy. Imbetsaka dia fantatry ny mpanjifa amin'ny fe-potoana farany fa tsy hahavita azy izy ireo. Toy ny lalan'ny dominoes, io dia mety hanimba drafitra maromaro any ambany izay tsy fantatry ny orinasanao.
Tags: Krismasyhetsika marketingBoky fivarotanahetsika marketingQR CodesFamakianaFanapahan-kevitraprograma valisoavalisoamarketing amin'ny takelaka
Fanontaniana 4 hapetraka amin'ny mpitsidika ny tranonkalanao
18 Septambra 2008 à 5:19
Tsy afaka manaiky bebe kokoa aho, Douglas. Ny lahatsoratrao dia tohanan'ny asan'i Szymanski sy Henard izay namoaka lahatsoratra tamin'ny 2001 izay nahita fa amin'ny toe-javatra sasany dia zava-dehibe kokoa ny fanantenan'ny mpanjifa amin'ny famaritana ny fahafaham-pony noho ny zava-bita!